BURMESE TITLE| ENGLISH TITLE | Real Conversion
၂၀၁၂၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊
”မောရှေသည်ကြေးဝါဖြင့် မြွေလုပ်၍တိုင်ပေါ်မှာမြှောက်ထားပြီးလျှင်၊ မြွေ ကိုက်ခံရသူက၊ ကြေးဝါကို ကြည့်ရှုသောအခါ၊ အသက်ချမ်းသာရကြ၏” (တောလည် ၂၁း၉)။
ဣသရေလလူတို့သည် သဲကန္တာရတော်ထဲ၌ လှည့်လည်ခရီးသွားကြသောအခါ၊ မြည်တမ်းလျှက်၊ပုန်ကန်ခဲ့ကြသည်။ ထာ၀ရဘုရားနှင့်မောရှေကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ခဲ့ကြ သည်။ ထိုသူတို့သည် မြည်းတမ်းပြေးဆိုသည်မှာ “သင်သည်ငါတို့ကို ဤတော၌သေစေ ခြင်းငှါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှ၊ (အဘယ်ကြောင့်) ဆောင်ခဲ့သနည်း? မုန့်မရှိ၊ ရေလည်းမရှိ၊ ဤပေါ့ပျက်သော စားစရာကိုလည်း ငါတို့သည်အလွန်ရွှံရှာ၏ဟု ဘုရားသခင်နှင့်မောရှေ ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ ဆိုကြ၏” “-မန္နမုန့်ကို ဘုရားသခင်ကောင်းကင်မှ ပေးခဲ့သည်။ (တောလည်၂၁း၅)။ မဿဲဟန်နရီပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ထိုသူတို့သည် ခါနန်လူတို့ကို ကြီးမားသော ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် အနိုင်ယူသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသော်လည်း-ထာ၀ရဘုရား သခင်၏ကြီးမြတ်သော ဘုန်းတန်ခိုးကို ကျေနပ်အားရခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ၊ ယုံကြည်ကိုးစား ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ကြပေ-ထိုသူတို့၌ ၀လင်စွာစားရသည်သာမကဘဲ၊ ပိုလျှံစွာစားရကြ သော်လည်း၊ မုန့်မရှိဟူ၍ မြည်တမ်းအော်ဟစ်ခဲ့ကြသည်” သောက်၍မကုန်နိုင်အောင် ရေစီးနေပါသော်လည်းဘုရားသခင်ကို အောဟစ်မြည်တမ်း ခဲ့ကြပါသည်! (Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, volume I, Hendrickson Publishers, 1996 reprint, p.519; comment on Number 21:4-9).
အကြောင်းမှာ ထိုသူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့်သာ ပုန်းကန်အော်ဟစ်မြည် တမ်းခြင်းဖြစ်သည်၊ ထာ၀ရဘုရားက မီးမြွေများကိုစေလွှတ်ပြီး သေအောင်ကိုက်စေခဲ့ သည်။ ၎င်းမြွေများကို “မီးမြွေဟုခေါ်ပါသည်၊ အကြောင်းမှာ ထိုမြွေတို့၏အရောင်နှင့် အကိုက်ခံရသောအခါ၊ ခန္တာကိုယ်ကို မီးလောင်ကျွမ်းသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး “ချက်ချင်းဆိုသလို ပင်အပြင်းဖျားစေနိုင်၍ ဖြစ်သည်”။ (ဟင်နရီအိုင်ဘီအိုင်ဒီ)။
“ထို့ကြောင့်လူအများတို့သည် မောရှေထံသို့လာ၍ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထာ၀ရဘုရား နှင့်ကိုယ်တော်ကို ဆန့်ကျင်လျှက်ပြောဆို၍ ပြစ်မှားပါပြီ၊ ထာ၀ရဘုရားသည်မြွေများကို အကျွန်ုပ်တို့မှ ဖယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါဟုလျှောက်လျှင်၊ မောရှေသည် လူများအဖို့ဆုတောင်းလေ၏” (တော၂၁း၇)။ ထို့နောက်ထာ၀ရဘုရားက မောရှေအား ကြေးဝါမြွေရုပ်လုပ်ပြီး သစ်တိုင်ပေါ်၌ ချိတ်ဆွဲထားရန် မိန့်တော်မူခဲ့၏။ ထို့နောက် မောရှေ သူ့လူများတို့အား ထိုချိတ်ဆွဲထားသော ကြေးဝါမြေရုပ်ကို ကြည့်သူတိုင်း အသက်ရှင်ခွင့်ရကြမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ “မောရှေသည်ကြေးဝါဖြင့် မြွေလုပ်၍ တိုင်ပေါ်မှာမြှောက်ထားပြီးလျှင်၊ မြွေကိုက်ခံရသူက ကြေးဝါမြွေကို ကြည့်ရှုသောအခါ အသက်ချမ်းသာရကြ၏” (တောလည် ၂၁း၉)။
ဒေါက်တာဂျွန်ုပ်အာရိုက်စ်၊ ပြောကြားခဲ့ရာတွင် “သေစေနိုင်သောမြွေဆိပ်၊ အဆိပ်အ တောက်သည် မြေကြီးပေါ်မြက်ခင်းပြင်ထက်၌ ရွေ့လျားပြီးဝင်ရောက်လာပါသည်! ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသော လက်ရုန်းတော်ဖြင့် ထာ၀ရဘုရားသည် ဣသရေလတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ခေါ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သနားကြင်နာစွာဖြင့် မန္နမုန့်၊ ကျောက်ဆောင်မှ ရေကိုထွက်လာစေပြီး အာမလက်လူတို့၏လက်မှ လွှတ်မြောက်စေခဲ့ပါသည်။ သို့တိုင် အောင် ထိုသူတို့၏နုတ်ခမ်းအားဖြင့် ချီးမွမ်းခြင်းကို အလျှင်းမပြုခဲ့ပေ။ ဤသည်တွင် အပြစ်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဟူ၍ သဲကန္တရ၌ ဖေါ်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (John R. Rice., D.D., The Bible Garden, Sword of the Lord Publisher, 1982, p. 212).
ဤအကြောင်းအရာ၌သင်ခန်းစာ သုံးမျိုးရှိပြီး၊ တရားစီရင်ရခြင်း၏ အကြာင်းတရား တရားစီရင်ခြင်းအဖို့ အရေးပါအရာရောက်သောအကြောင်းအရာနှင့် တရားစီရင်ခြင်းအဖို့ ကုထုံးနည်းဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ပထမ၊ တရားစီရင်ခြင်း၏ အကြောင်းတရား၊
“သင်သည် ငါတို့ကိုဤတော၌ သေစေခြင်းငှါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှ အဘယ်ကြောင့် ဆောင်ခဲ့သနည်း?။မုန့်လည်းမရှိ၊ ရေလည်းမရှိ၊ ဤပေါပျက်သောစားစရာကိုလည်း ငါတို့သည် အလွန်ရွှံရှာ၏ဟု ဘုရားသခင်နှင့်မောရှေကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ ဆိုကြ၏ (တောလည်၂၁း၅)။ သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့်သာ မြည်တမ်းအော်ဟစ်ခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တကယ်ကိုပင် ဘုရားသခင်နှင့် မောရှေအယုံအကြည်မဲ့ခဲ့ ကြသည်!
“အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးနှစ်သက်တော်မမူသော သူတို့ကား၊ အဘယ်သူနည်း ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပြုသောကြောင့် တော၌လဲ၍သေသောသူပင်မဟုတ်လော။ (ဟေဗြဲ ၃း၁၇)။
“ထိုအချို့တို့သည် စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုပြု၍၊ မြွေဖြင့်ပျက်စီးသကဲ့သို့ငါတို့ သည်မပြု၊ ခရစ်တော်ကိုမစုံစမ်းမနှောင့်ရှက်ဘဲ နေကြကုန်အံ့။ ထိုသူအချို့
“ တို့သည် မြည်တမ်းခြင်းကိုပြု၍၊ ဖျက်ဆီးသောသူ၏လက်ဖြင့် ပျက်စီးသကဲ့ သို့မဟုတ်၊ မြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်။ ထိုအကြောင်းအရာ ရှိသမျှတို့သည် ပုံသက်သေဖြစ်အံ့သောငှါ ထိုသူတို့၌ရောက်ကြ၏။ ကပ်ကာလအဆုံးတွင်ဖြစ် သော ငါတို့ကိုဆုံးမစရာဘို့ကျမ်းစာ၌ ရေးထားလျက်ရှိသတည်း။ (၁ကော ၁ဝး၉-၁၁)။
ကနေ့ည၊ အချို့သော၊ အပြစ်သားတို့သည် ဘုရားသခင်ကို အော်ဟစ်မြည်တမ်းကြ မည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ အချို့သောသူတို့သည် သင်တို့အဖို့အမှုပြီးစီးခြင်းမရှိသေးဟု တွေးထင်သောသူတို့လည်း သင်တို့အထဲ၌ရှိမည်၊ သို့တည်းမဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ အလွန်အင်မတန်ခက်သည်ဟု တွေးထင်မြင်သူလည်းရှိပါမည်။ သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲ၌ ငြီးတွားအော်ဟစ်နေသူလည်းရှိနေမည်။ ယေရှုကိုမမြင်ရဘဲ အဘယ်ကြောင့် ယုံကြည်နေ မည်နည်း?ဟူ၍ သင်ပြောကောင်းပြောနေမည်။ သက်သေအထောက်အထားမှမရှိဘဲ အဘယ်သို့ ယေရှုသခင်ထံ၊ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရမည်နည်း?ဟူ၍ သင်ပြောနေပေမည်။ အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်၏အပြစ်ကိုစွန့်ပြီး ခရစ်တော်သခင်ကိုကိုးစားရမလဲ?” ဟူ၍ သင်ပြောနိုင်ပါသည်သို့သော်၊ ဤကဲ့သို့ငြင်းဆန်ခြင်းသည် ဆိုးသွမ်းခြင်းအပြစ်ပင်ဖြစ် သည်။ ၎င်းသည် ဝိညဉ်ဆိုးစိုးမိုးထားသော နှလုံးသားထဲမှ ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလု ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ထိုသူအချို့တို့သည် စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း ကိုပြု၍၊ မြွေဖြင့်ပျက်စီးသကဲ့သို့၊ ငါတို့သည်မပြု၊ ခရစ်တော်ကိုမစုံစမ်းမနှောင်ယှက်ဘဲ နေကြကုန်အံ့” (၁ကော၁ဝး၉)၊
အကယ်၍ သင်သည်ယေရှုခရစ်ကို ငြင်းပယ်မည်ဆိုလျှင်၊ သင်သည်သင့်အပြစ် ကြောင့်သာလျှင်သေရမည်ဟု ကျွန်ုပ်သတိပေးပါရစေ။ အကယ်၍ မြည်တမ်းအော်ဟစ်မြဲ အော်ဟစ်ဆန့်ကျင်နေမည်ဆိုလျှင် “နောက်တစ်ဖန် အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကို ပူဇော်ရာအခွင့် မရှိဘဲ၊ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံရမည်ဟု ကြောက်မတ်ဖွယ်သော မျှော်လင့်ရာရသောအကြောင်း၊ ငြင်းဆန်သောသူတို့ကို ဖျက်ဆီးဖို့ရာအမျက်တော်၊ မီးလောင်ခြင်းကို ခံရသောကြောင့်ရှိ ၏။(ဟေဗြဲ၁ဝး၂၆-၂၇)။ တရားစီရင်ခြင်းသည် သင့်အပေါ်သို့ ကျရောက်လာပေမည်။ အကယ်၍သာ သင်သည် သင့်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ပြီး ယေရှုခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်မည် ဆိုလျှင်၊ သူသည်အမှတ်မထင်ရူအးကလာပြီး “ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို နားမထောင်သောသူတို့ကို မီးလျှံအားဖြင့် ဒဏ်ပေးတော်မူသောအခါ” (၂သက်၁း၈)။ သင် သည်”သခင်ဘုရား၏ မျက်နှာတော်နှင့်၎င်း၊ တန်းခိုးရှိသောဘုန်းတော်နှင့်၎င်း၊ ကွာ၍ ထာ၀ရပျက်စီးခြင်းအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြလတံ့”(၂ကော ၁း၉)။
သဲကန္တရ၌ မယုံကြည်သော ဣသရေလအများတို့၌ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မ ဟုတ်ပါလား? မီးမြွေအားဖြင့် အကိုက်ခံခဲ့ရကြသည်မဟုတ်ပါလား? သေကြေကြပြီး ငရဲ ကို သွားခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ပါလား? သင်သည်လည်း ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ထံ တိုးဝင် ချဉ်းကပ်ခြင်းမရှိပါလျှင် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်မည်ကို ပုံဥပမာပေးထားခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်ပါ လား?
“သို့သော်လည်း၊ များစွာသောသူတို့ကို ဘုရားသခင်အားရနှစ်သက်တော်မမူ၊ တော၌သူတို့သေကြေပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ထိုသူတို့သည် မကောင်း သောအရာတို့ကို တပ်မက်သကဲ့သို့ ငါတို့သည် မတပ်မက်စေခြင်းငှါ၊ ထိုအ ကြောင်းအရာတို့သည် ငါတို့အဖို့ပုံသက်သေဖြစ်ကြ၏။(၁ကော ၁ဝး၅-၆)။
သူတို့သည် တရားသူကြီးဖြစ်သောဘုရားသခင်ကို ဟော်ဟစ်မြည်တမ်းလျှက် ဆန့်ကျင် ပုန်ကန်ကြသည်။
၂။ ဒုတိယ၊ စီရင်ခြင်းအတွက်အရေးပါအရာရောက်သောအကြောင်းတရား၊
အချိန်တန်၍သေချာသောနေ့ရက်၊ အချိန်နာရီ၌ဘုရားသခင်သည် မီးမြွေကိုစေလွှတ် လျှက် ထိုသူတို့ကိုကိုက်၍ သေစေလေ၏။ မဿဲဟန်နရီပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ထိုသူတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသော လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမီးမြွေများ၊ အများအပြားရှိနေပါသည်။ တရား၈း၁၅၊သို့ပါသော်လည်း ထာ၀ရဘုရားသည် အံ့ဩဖွယ် ထိုနာကျင်ခြင်းဝေဒနာမှ သက်သာပျောက်ကင်းစေခဲ့၏။ ထိုသူတို့ညဉ်းတွားအော်ဟစ်ခြင်းမှ ဘုရားရှင်က၎င်း မြွေ များကို ထိုသူတို့၏တဲများမှ ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါ၏။ ယ္ခုဆိုလျှင် ၎င်းမြွေတို့သည် ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ပြီးကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရာများသည် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းဖြစ် ၍ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏သနားခြင်းဂရုဏာကို ကျေးဇူးမတင်တတ်သော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤမြေဆိုးများ ကိုက်ပါက ချက်ချင်းအဖျားကြီးလာပါသည်။ ရေကို အငတ်ကြီးငတ်စေသည်။ အခန်းငယ်၅ကို ဖတ်တဲ့အခါ ထိုသူတို့ရေမရှိသဖြင့် အော်ဟစ် မြည်တမ်းခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရေဆာလောင်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်ခြင်းဖြစ် သည်။ အဆာပြေစေသောရေဟူ၍ မရှိခဲ့ပါ။ (Henry, ibid. 519-520).
ထိုကဲ့သို့သော မြွေဆိုးတို့ကို ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့၏ တဲအိမ်များမှ ဖယ်ရှား ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၏ အပြစ်နှင့်နာမခံမှုဖြင့် ၎င်းတို့အလယ်၌ ဝင်ရောက်ကျူး ကျော်လာပေပြီ။ နာကျင်ခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်ထာ၀ရပြင်းထန်သောငရဲကို ခံစားစေပြီဖြစ် သည်။ ထိုမြွေဆိုးများအားဖြင့် ကြွချြွက်ချင်း။ြွက! ထိုသူတို့ဝေဒနာကို ခံစားရကြသည်! ဓမ္မသစ် ကျမ်း၌ ကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးခဲ့သည်မှာ “သူတို့ပေါ်၌ လျှင်မြန်စွာသောပျက်စီးခြင်း ရောက်၍ လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိရကြ”(၁သက်၅း၃)ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာ၍မိုက်မဲသော သူဌေးကြီးအား ထိုကဲ့သို့ဖြစ်မည်ကို ခရစ်တော်ဟောခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား? ထိုသူဌေး ကမိမိကိုယ်ကို “ငြိမ်ဝပ်စွာနေလော့။ စားသောက်ခြင်း၊ ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုလော့ ငါပြော မည်ဟု သူဌေးအကြံရှိ၏”(လုကာ၁၂း၁၉)။ သို့သော် ဘုရားသခင်က “အချင်းလူမိုက်၊ ယ နေ့ညဉ့်ပင် သင်၏ဝိညာဉ်ကို ရုပ်သိမ်းရာအချိန်ရောက်လိမ့်မည်” (လုကာ ၁၂း၂၀) ဟူ၍ ပြောပေမည်။ သူဌေးသည် ချမ်းသာရူအးကယ်၀သော်လည်း ချက်ခြင်းဆိုသလိုပင် ခန္တာကိုယ် နှင့်ဝိညာဉ်ခွဲခွါမည့် အချိန်ရောက်လာပေမည်။ ထိုည၌ပင် သူဌေး၏ဝိညာဉ်သည် ခန္တာ ကိုယ်မှခွဲခါသွားပြီး မီးငရဲ၌ ပြင်းစွာခံစားရသည်! ရှင်လုကာ၁၆း၌ ဖေါ်ပြထားသော သူ၏ကံကြမ္မာနှင့်တူနေသည် မဟုတ်ပါလား? ထိုသူသည် ချက်ချင်းသေဆုံးပြီး “မရဏာ နိူင်ငံ၌ ပြင်းပြစွာသော ဝေဒနာကိုခံရလျှက်မျှော်ကြည့်၍” (လုကာ ၁၆း၂၃)၌ ဖော်ပြထား ပါသည်။
တရားစီရင်ခြင်းသည် နှေးကွေးစွာ ရောက်လာကောင်းရောက်လာပါမည်၊ သို့သော် ရောက်လာသောအခါ ကြွချြွက်ချင်း။ြွကဝေဒနာခံစားရပါမည်။ မြွေဆိုးတို့သည် ချက်ချင်းရောက် လာသကဲ့သို့၊ ဘုရားသခင်ကိုငြင်းဆန်သော သူတို့အပေါ်သို့စီရင်ခြင်းသည် ချက်ချင်း ရောက်လာပြီး သင်သည်လွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။!
ထိုမီးမြွေတို့သည် စာတန်နှင့်အပေါင်းအပါကို ပုံဆောင်ပါသည်။ သင့်အားရှေ့မြွေ ဟောင်းစာတန်နှင့်အပေါင်းအပါတို့၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ သင့်အားဘုရားသခင်ကာကွယ်ခဲ့ ပြီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။(ဗျာဒိတ် ၁၂း၉)။ တစုံတခုသောနေ့ရက် (ကန့်သတ်ထားသောနေ့ရက် (ဟေဗြဲ ၄း၇)၌ အကယ်၍ ဘုရားရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဆိုလျှင် ဘုရားရှင်သည် ထိုမြွေဆိုးဟု ခေါ်သောစာတန်နှင့် အပေါင်းအပါများကို သင့်အပေါ်စေလွှတ်မှာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ယေရှုထံနောင်တရသော စိတ်နှလုံးဖြင့် မချဉ်းကပ်သောသူတို့အပေါ် ထိုသို့သော စာတန် နှင့်အပေါင်းအဖော်တို့ကို စေလွှတ်မည်ဖြစ်သည်!
“ညစ်ညူးသောနတ်သည် လူထဲကထွက်လျှင်၊ ခြောက်ကပ်သောအရပ်တို့၌လည် ၍ ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကို ရှာတတ်၏မတွေ့လျှင်ငါသည် ထွက်ခဲ့သောနေမြဲအိမ်သို့ပြန် ရအုံးမည်ဟုဆို၍ ရောက်သောအခါ၊ ထိုအိမ်သည် လွပ်လပ်၍သုတ်သင်ပြင် ဆင်လျှက်ရှိသည်ကိုတွေ့သော်၊ မိမိထက်သာ၍ ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုးခုနှစ် ယောက်ကို ခေါ်ပြီးလျှင်၊ ထိုလူထဲသို့ဝင်၍နေကြ၏၊ ထိုလူ၏နောက်ဖြစ်ဟန် သည် ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်သာ၍ ဆိုး၏ဆိုးညစ်သော ဤလူမျိုး၌ထိုနည်းတူဖြစ် လတံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏’ ‘(မဿဲ ၁၂း၄၃-၄၅)။
သူတို့သည် မောဆန့်ကျင့်ဘက်ပြုကြ။ အိုးထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်နေမှုကို မရေမတွက် နိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ပါပြီ! လူတဦးသည် အသင်းတော်၌လည်းပါဝင်မည်၊ အသက် တာကိုလည်းသန့်ရှင်စင်ကြယ်ပါလိမ့်မည်၊ သို့သော် ခရစ်တော်အရှင်နှင့် သူ၏ဂရုဏာ တော်ကို ငြင်းပယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကန့်သတ်ထားသော နေ့ရက်ဆိုးညစ်သော ဝိညာဉ်ဆိုး များရောက်လာပြီး သေခြင်းတိုင်နှိပ်စက် နေမည်ဖြစ်သည် “ထိုသူ၏ နောက်ဖြစ်ဟန်သည် ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆိုး၏”(မဿဲ၁၂း၄၅)။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို လက်ခံယုံကြည် ဖို့ငြင်းဆန်သောသူတို့၌ ပျက်ခဲသော အဖြစ်အပျက်ကို သင်တို့အားပြောလိုပါသည်!
ဤသည် အဖြစ်အပျက်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသူက “ကျွန်ုပ်ကောင်းပါတယ်”ဟူ၍ ပြောခဲ့၏။ သို့သော် သူ့၏ခေါင်းတံခါးကို ဖွင့်ကြည်သောအခါ၊ ခေါင်း၌သေနတ်ဒဏ်ရာ ကို ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ “ကျွန်ုပ်ကောင်းပါတယ်”ဟူ၍ ပြောပြီးရေထဲနှစ်သေခဲ့တာတွေ့ ရတယ်။ ဤသည် သူတွေးထင်တာထက်နက်နဲမှုပင်ဖြစ်သည်။ ရေအောက်ကြမ်းကို အချိန် ဖြင့်ထိုးကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့၏လည်ပင်းလည်းကြိုးပြီး ဒုက္ခိတဘ၀ဖြင့် သေဆုံးခဲ့ပါ သည်။ သူက “ကျွန်ုပ်ကောင်းပါတယ်”ဟူပြောကြားခဲ့သည်။ သစ်ပင်တစ်ပင်၏ အရိပ် အောက်ထဲထားပြတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ သူ၏အော်သံကိုကြားကြသည်။ သူ့ဆီသို့မ ရောက်ခင်သူသည် အသံကုန်အော်လျှက် “ကျွန်ုပ်ကောင်းပါတယ်” ဟူ၍ပြောခဲ့၏။ သူ သည် ချက်ချင်းအန်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ သူက “ကျွန်ုပ်ကောင်းပါတယ်”ဟုပြောပြီး မိမိကားသည် လမ်းကြောင်းလွဲသွားပြီး လမ်းဘေးသို့ထိုးကျခဲ့၏။ သူမသေခင်သူ့ဆီသို့ ရောက်သွားသောအခါ၊ သူ့၏အူတို့သည် ထွက်ကျလာပြီး၊ အသက်ကိုအောက်ပြီးရှုရသည် သူသည်ထာ၀ရမီးငရဲထဲသို့မရောက်ခင် ဝေဒနာပြင်းစွာခံစားသွားခဲ့ရသည်။ မကြာမှီသူ့ကို တွေ့သောအခါ သူ၏မျက်နှာသည် ဖြူဖက်ဖြူရော်နေပြီး၊ လက်လည်းတုန်ရီနေပါသည်။ ထပ်တလဲလဲပြောသည်မှာ “ကျွန်ုပ်သူ့ကို မကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဘူး”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ “သူ့ကို မကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဘူး”၊ “သူ့ကိုမကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဘူး”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤ သည်အဖြစ်အပျက်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ စိုးစဉ်းမျှ ကျွန်ုပ်ချဲထွင်ခြင်းမဟုတ်သည်ကို ဘုရားသခင်သိနေပါသည်! နေဟမိပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“အိုကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင် ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရား၊ ကြီးမြတ်၍ ကြောက် မတ်ဖွယ်သောဘုရား”(နေဟ ၁း၅)။
“အလွန်ကြီးမြတ်၍၊ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်ဖြစ်တော်မူသော အရှင်” (ဒံယေလ ၉း၄)။
“ထိုအခါ ထာ၀ရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးတို့တွင် မီးမြွေများကို စေလွှတ် တော်မူ၍ လူများစွာကိုက်ခံရသဖြင့် သေကြ၏။(တောလည် ၂၁း၆)။
မီးမြွေများသည် အပြစ်သားတို့အားကိုက်၍ အဆိပ်သင့်စေသကဲသို့ ခရစ်တော်ဘုရားသ ခင်ကို ယုံကြည်၍ နောင်တနှင့်မကြည့်ရှု့သူတို့သည် ထာ၀ရစီရင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်!
ကျွန်ုပ်တို့သည်၊ ထိုသူတို့အပေါ် တရားစီရင်ခြင်းကို တွေ့မြင်ရကြပြီဖြစ်သည်။ အခုဆိုလျှင်၊ နောက်ဆုံးသော ပွိုင့်အချက်ကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။
၃။ တတိယ၊ စီရင်ခြင်းကိုကုသခြင်း
“ထို့ကြောင့် လူများတို့သည် မောရှေထံသို့လာ၍ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထာ၀ရဘု ရားနှင့်ကိုယ်တော်ကို ဆန့်ကျင်လျှက်ပြောဆို၍ ပြစ်မှားပါပြီ၊ ထာ၀ရဘုရား သည် မြွေများကိုအကျွန်ုပ်တို့မှပယ်ရှားတော်မူမည့်အကြောင်း ဆုတောင်းပါ ဟု လျှောက်လျှင် မောရှေသည် လူအများအဖို့ဆုတောင်းလေ၏။ ထာ၀ရဘု ရားကလည်း မီးမြွေရုပ်ကိုလုပ်၍ တိုင်ပေါ်မှာ မြှောက်ထားလော့မြွေကိုက်ခံရ သူတိုင်းကြည်ရှုလျှင် အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ သည်အတိုင်း မောရှေသည် ကြေးဝါဖြင့် မြွေလုပ်၍တိုင်ပေါ်မှာ မြှောက်ထား ပြီးလျှင်၊ မြွေကိုက်ခံရသူက ကြေးဝါမြွေကို ကြည့်ရှုသောအခါ အသက်ချမ်း သာရကြ၏။(တောလည် ၂၁း၇-၉)။
ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများ လွှတ်မြှောက်ရာလမ်းကို ပေးတော်မူခဲ့သည်။ “မြွေ ကိုက်ခံရသူက ကြေဝါမြွေကို ကြည့်ရှု့သောအခါ၊ အသက်ချမ်းသာရကြ၏”(တောလည် ၂၁း၉)။
အကယ်၍ ယေရှုသည် ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၃၌ ထိုကဲ့သို့ ပုံဥပမာအားဖြင့် နိကောဒင်နှင့်ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ခဲ့သော် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ထိုအကြောင်း အရာကို ဂရုစိုက်နားထောင်စရာလိုမည်မဟုတ်ပါ။ နိကောဒင်သည် ဂျူးလူမျိုးအမျိုးစာပေ သင်ကြားပေးသော ဘာသာရေးဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယေရှုက၊ နိကောဒင်အား မောရှေနှင့်ကြေးဝါးမြွေရုပ်အကြောင်း ပြောကြားပေးခဲ့၏။ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ် သည့်အတိုင်း နိကောဒင်သည် တောလည်ရာကျမ်း၂၁၌ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ကြေးဝါ မြွေရုပ်အ ကြောင်းနားလည်သူဖြစ်သည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“မောရှေသည် တော၌မြွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့ လူသားသည်မြှောက်ထား ခြင်းကိုခံရမည်၊ အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်း တို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက် ထာ၀ရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းတည်း (ယောဟန် ၃း၁၄-၁၅)။
စီရင်ခြင်းမှ သင်လွှတ်မြောက်နိုင်ဖို့၊ တော၌ကြေးဝါမြွေရုပ်ကိုထောင်ထားသကဲ့သို့ ကားတိုင်ပေါ်ဆွဲထားခြင်းခံရသော ယေရှုသခင်ကို သင်ကြည့်မျှော်ပါ။ “မြွေကိုက်ခံရသော သူက၊ ကြေးဝါမြွေကို ကြည့်ရှုသောအခါ၊ အသက်ချမ်းသာရကြ၏ (တောလည် ၂၁း၉)။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“မောရှေသည် တော၌မြွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့ လူသားသည်မြှောက် ထားခြင်းကိုခံရမည်၊ အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ အပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက် ထာ၀ရအသက်ကို ရမည်အ ကြောင်းတည်း၊ (ယောဟန် ၃း၁၄-၁၅)။
ဒီမနက်ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးပြီး သွားပြီးနောက်၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ကျွန်ုပ်စ ကားပြောဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုသူက “ယေရှုက ကျွန်ုမ၏ယုံကြည်ခြင်းကို မငြင်းပယ်သောကြောင့် ကျွုန်ုပ်မကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် ယောဟန်၆း၃၇ကို ရည်ညွှန်းကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ “ငါ့ထုံသို့ လာသောသူကို ငါသည် အလျှင်းမပယ်” ကျွန်ုပ်ကလည်း ထိုသို့မဟုတ်ရပါဘူး၊ ယောဟန်၆း၃၇ကို သင်ယုံကြည် နေတာဖြစ်တယ်။ ကျမ်းပိုဒ်ကိုယုံကြည်လို့ သင်ကယ်တင်ခြင်းရမည်မဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော် ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းကသာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်! ဟူ၍ ကျွန်ုပ်ထိုသူကိုပြော ပေးခဲ့၏ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ကျမ်းစာအားဖြင့် ထာ၀ရအသက်ကိုရမည်ဟု စိတ်ထင်နှင့်သင်တို့သည် ကျမ်း စာကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုကြ၏ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏သက်သေဖြစ်၏။ သင်တို့သည် အသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းငှါအလိုမရှိကြ” (ယောဟန်၅း၃၉၄၀)။
နူတ်ကပတ်တော်က၊ ယေရှုထံသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်သောသူကို အလျှင်းမပယ်ဟု လာပါ သည်။ သို့သော် နုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပါ။ ငြွဩွင်သည် ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားရမည်!။ြွင ယေရှုကိုယုံကြည်ရမည်။ ယေရှုထံတိုးဝင် ချဉ်းကပ်ရပါ မည်။ ကျမ်းစာကို ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ကြွယေရ။ြွကIကိုမျှော်ကြည့်ရပါမည်!
သင့်ကိုသင်မကြည်ပါနှင့်! သင့်၏အတွေးအခေါ်၊ ခံစားမှုနှင့်သံသယများကို မယုံ ကြည်ပါနှင့်! ယေရှုကိုမျှေကြည့်ပြီး ယုံကြည်လိုက်ပါ! ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊ “ငါ့ကိုမျှောကြည့်၍ ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံကြလော့”(ဟေရှာယ၄၅း၂၂)။ ဘုရားရှင် ကို တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းနှင့်မယုံကြည်သော စိတ်ထားများကို ပယ်ရှားလိုက်ပါ၊ သင့်အ ပြစ်အတွက် အသေခံပေးသွားသော ယေရှုဘုရားကိုသာ မျှော်ကြည့်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရယူ ပါ။ ကောင်းကင်ဘုံ၊ ခမည်းတော်၏ လင်္ကျာဘက်၌ စံမြန်းတော်မူ၍ သင့်အဖို့ဆုတောင်း ပေးနေသော ယေရှုကိုမျှော်ကြည့်ပါ! ယေရှုကိုမျှော်ကြည့်၍ ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုရ ယူလိုက်ပါ၊ ကြေးဝါမြွေရုပ်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီး ချမ်းသာခွင့်ကို ဣသရေလလူတို့ရရှိကြသ ကဲ့သို့၊ ယေရှုကိုမျှော်ကြည့်ပြီး၊ ဒီနေ့ညပင် ကယ်တင်ခြင်းရယူလိုက်ပါ! “ကြည့်၍ အသက်ရှင်ပါ”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို မစ္စတာဂရိဖက်စ်က ဒေသနာမတိုင်ခင် သီဆိုပေးခဲ့ သည်။ ၂၀ရာစုတုန်းက “အပေါ်ယံခရစ်ယာန်များက ကြည့်၍ အသက်ရှင်ပါအပြစ်သား” ဟူသောဓမ္မသီချင်းကို ကြည့်မျှော်၍အသက်ရှင်လော ငါ့ညီအကိုများဟူ၍ ပြောင်းလဲပေး ခဲ့သည်။ သင်သည် ယေရှုကိုကြည်၍ ကင်တင်ခံရသူမဟုတ်ပါက ယေရှု၏ညီအစ်ကို မဖြစ်နိုင်ပါ! ထာ၀ရမီးငရဲထဲ၊ ကျရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မူရင်းဓမ္မသီချင်းကဲ့ သို့ကြည့်မျှော်၍ အသက်ရှင်ပါ အိုအပြစ်သားဟူသော ဓမ္မသီချင်းသီဆိုကြပါစို့။ ထိုသီ ချင်းကိုထပ်မံ၍သီဆိုသည်။ ယေရှုကိုမျှော်ကြည့်၍ သင့်အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ပေါ် အသေခံသော ယေရှုကိုမျှော်၍ ကြည့်ယုံကြည်လက်ခံပါ။ မြွေဆိုးအဆိပ်အတောက်နှင့် သေခြင်းတန်ခိုးမှ ယေရှုကိုမျှော်ကြည့်၍ အသက်ရှင်လိုက်ပါ။ ယေရှုကို မျှော်ကြည့်၍ အသက်ရှင်ပါ!
နုတ်ကပတ်တော်သည် သတင်းကောင်း ဟာလေလုယာ!
(၁၈၄၁-၁၈၉၇ ဝီလျံ.အေ.အောက်ဒန် ရေးသားသီကုံးသော “မျှော်ကြည့်၍အ
“မောရှေသည်ကြေးဝါဖြင့် မြွေလုပ်၍တိုင်ပေါ်မှာ မြှောက်ထားပြီးလျှင်၊ မြွေကိုယ်ခံရသူက၊ ကြေးဝါကြည့်ရှုသောအခါ အသက်ချမ်းသာရကြ၏။ (တောလည် ၂၁း၉)။
၁။ ပထမ၊ ရညဘျစးစီရင်ခြင်း၏အကြောင်းတရား၊ တောလည် ၂၁း၅၊ ဟေဗြဲ ၃း၁၇-၁၉၊ ၁ကော ၁ဝး၉-၁၁ ဟေဗြဲ ၁ဝး၂၆-၂၇၊ ၁ကော ၁း၈၊၉၊ ၁ကော ၁ဝး၅-၆
၂။ ဒုတိယ၊ရညဘျစး စီရင်ခြင်းအတွက် အရေးပါအရာရောက်သော အကြောင်းတရား၊ ၁သက် ၅း၃၊ လုကာ ၁၂း၁၉၊၂၀၊ ၁၆း၂၃၊ ဗျာဒိတ် ၁၂း၉၊ ဟေဗြဲ ၄း၇
၃။ တတိယ၊ရညဘျစး စီရင်ခြင်းကို ကုစားခြင်း၊ တောလည် ၂၁း၇-၉၊ ယောဟန် ၃း၁၄-၁၅ ယောဟန် ၆း၃၇၊ ၅း၃၉-၄၀၊ ဟေရှာ ၄၅း၂၂